आजदेखि हिमालयन हाइड्रोपावरको साधारण सेयरमा आवेदन खुल्यो - Khabar Center
आजदेखि हिमालयन हाइड्रोपावरको साधारण सेयरमा आवेदन खुल्यो
२५ बैशाख २०७९
हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजबाट साधारण सेयर जारी गरेको छ ।
कम्पनीले आइतबारबाट आयोजना प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुका लागि जारी पूँजी १ अर्ब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँको ८.२२ प्रतिशत सेयर निष्काशन गरेको हो ।
जस अनुसार कम्पनीले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिशेयर १०० अंकित मूल्यका ९ लाख कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात कास्की जिल्लाको मादी गाउँपालिका वडा नं. १, २, ३, ४, ६ र ७ का स्थानिय बासिन्दाहरुका लागि आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो।
प्रकाशित मिति :बैशाख २५ २०७९ आइतवार - १८:२५:१७ बजे
२३.५१ अंकले घट्यो शेयर बजार: ३० कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्यो, कुनको कति ?
दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै डलरको भाउ
अन्तरिक ऋण उठाउन १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंक
करिब ९ अंकले बढ्यो शेयर बजार, कतिको भयो कारोबार ?